Ciidamada DF oo howlgallo kula wareegay deegaano ku yaalla gobolka Baay | Xaysimo
Home War Ciidamada DF oo howlgallo kula wareegay deegaano ku yaalla gobolka Baay
Ciidamada DF oo howlgallo kula wareegay deegaano ku yaalla gobolka Baay
Faah faahino dheeraad ayaa waxaa laga helayaa howlgallo ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed saacadihii la soo dhaafay ay ka sameeyeen deegaano hoos yimaad degmada Diinsoor ee gobolka Baay.
Howlgallada oo ahaa kua qorsheysan ayaa waxaa ciidamada huwanta au kula wareegeen deegaanada Bandhuub iyo Biilane oo ay horay ugu sugnaayeen dagaalyahanada Al-Shabaab.
Saraakiil ka tirsan milatariga oo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay in ujeedkooda uu yahay, sidii Al-Shabaab looga saari lahaa halkaasi oo uu tilmaamay inay ku dhibaateeyaan dadka dhacabka ah ee isaga kala gooshayada waddooyinka gobolka Baay.
Dhankiisa guddoomiyaha degmada Diinsoor Cabdi Salaan Xaaji Siidow ayaa sheegay in xilliyada ay soo dhowdahay Bisha Ramadaan ay kooxda Al-Shabaab ay culeys xoogan soo saarto degmada, balse wuxuu tilmaamay inay wax ka qaban doonaan dhibaatooyinkaasi.
Xaaladda ayaa saaka ah mid kacsan, iyadoona dhaq dhaqaaqyo iska soo horjeedo laga dareemayo duleedka degmada Diinsoor ee gobolka Baay.
Weli dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa deegaano iyo degmooyin ka heysta gobollada Baay iyo Bakool oo dhaca koonfurta Soomaaliya.